Obodo ise kachasị amasị nke British na Great Britain | Akụkọ Njem
Obodo 5 kachasị amasị nke British na Great Britain
Maria | | United Kingdom, njem
Great Britain nwere ike ịbụ otu n'ime mba Europe kachasị amasị maka Spanish maka ọtụtụ ebumnuche. Omenala ya, ndụ abalị ya, ịdị nso ya ... Obodo ọ bụla na-enye ihe ọhụụ, dị iche na ihe anyị nwere ike iji na mba anyị si ma enwere ike ọ ga-esiri anyị ike ịhọrọ ndị ọkacha mmasị anyị. Ndị Britain ọ ga-adị mfe?
N’oge na-adịbeghị anya, akwụkwọ akụkọ Telegraph mere nnyocha nke ndị na-agụ ya na-ajụ bụ obodo kachasị amasị ha na Great Britain. Mgbe ụfọdụ, mgbe a bịara n'ịgagharị, ọ kachasị mma ịme ya na-agbaso ndụmọdụ nke ndị obodo dịka ha maara akụkọ ntolite nke nkuku ọ bụla na ebe ndị kachasị egwu.
5 St Davids
Dabere na ndị na-agụ akwụkwọ a na-ewu ewu na Britain, Edinburgh bụ obodo kachasị amasị ha karịsịa maka akụkọ ọdịnala na ọdịbendị ya bara ụba. O nwere ngwakọta nke dị n'etiti ihe omimi na ịma mma nke na-atọ onye ọ bụla ọbịa ọbịa. Ọ bụ a pụrụ nnọọ iche obodo, jupụtara cobbled alleys, mara mma n'ubi na-akpali mmasị ngosi ihe mgbe ochie na ncheta.
Na nleta gị na Edinburgh ị gaghị echefu aha Edinburgh a ma ama, nke dị n'elu Castle Hill. A na-echekwa ya n'akụkụ atọ nke akụkụ ya site na ọnụ ọnụ ugwu, enwere ike ịnweta ya site na ịrịgo mkpọda ugwu ahụ.
Emere okpueze a na-eme eme na Edinburgh bụ Honors of Scotland ma debe ya na nnukwu ụlọ, dịka ihe bara ezigbo uru nye ndị Scottish. Na nnukwu ụlọ ị nwekwara ike ịga na National War Museum na nnukwu ụlọ mkpọrọ.
Wayzọ ọzọ iji mụta banyere akụkọ ihe mere eme nke obodo site na ịga na Gladstones 'Land, ụlọ ụlọ ahịa nke narị afọ nke 1620 echekwara nke ọma iji mụta ihe ndụ dị ka ọtụtụ narị afọ gara aga n'obodo ahụ. N'elu ala enwere ndi nkuzi ihe site na XNUMX ma enwere ike ihu ulo n'ulo n'ime ulo.
N'aka nke ọzọ, a na-atụ aro ka ị gaa na National Museum of Scotland (nke bụ n'efu) iji mụta akụkọ ihe mere eme niile nke Scotland site na ihe di iche iche dika oru aka, ngwa oru, ọla ma obu ngwa agha.
Cosmopolitan, akụkọ ihe mere eme, ebube ... ọtụtụ adjective nwere ike ịkọwa isi obodo nke Great Britain. Obodo ahụ buru ibu nke na e nwere ọtụtụ London, nke mere na ọ bụ otu n'ime ebe kachasị amasị ndị njem nleta.
Ogwe ya, ụlọ nri ya, ebe a na-eme ihe nkiri, ụlọ ahịa ya, ihe ncheta ya na, na nkenke, ọtụtụ oge ezumike enwere. Na mpaghara ọ bụla nke London enwere ebe ị ga-atụfu onwe gị ma nwee ọ enjoyụ n'agbanyeghị na Camden Town ga-apụta maka ọnọdụ ọzọ ya, ụlọ ahịa ya dị iche iche na ahịa nke ụlọ ahịa n'okporo ámá nke nri Italiantali ma ọ bụ Eshia, n'etiti ndị ọzọ.
N'ikwu okwu banyere ahịa, onye ọzọ ama ama bụ otu na Portobello. O nwere ulo ahia mara mma nke juputara na ihe mgbe ochie n’okporo ámá na-adịghị agwụ agwụ. Agbanyeghị, nke a dịtụ karịa ọdịbendị karịa Camden Town yabụ ọ kacha mma ileta ha abụọ.
Na London enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme site n'echiche ọdịbendị. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga obodo ahụ, ị ​​gaghị echefu National Gallery, British Museum, National Portrait Gallery, Museum of London, Madame Tussauds Museum… ha dị ọtụtụ, mana ha bara uru maka ihe niile ha na-enye! Otu ihe a maka ihe ncheta: London Eye, Buckingham Obí, St. Paul Katidral, Westminster Abbey… na nkenke, London bụ paradaịs maka ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị n'anya.
Nke a ọmarịcha British obodo bụ a na-adọrọ mmasị na-aga na ihe karịrị afọ 2.000 nke akụkọ ihe mere eme. Ọ dị n'ebe ugwu nke England na, dị ka ịmata, n'oge emepechabeghị, ewere ya dị ka obodo nke abụọ kacha baa ọgaranya na mba ahụ mgbe London gachara n'ihi ahia ajị. Ya ọdịda bịara mgbe Agha nke Roses abụọ, na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, na mgbasa nke ebe obibi ndị mọnk na ọdịda nke ahia ajị anụ.
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị nke obodo a bụ oge ochie ọ nwere, nke a pụrụ ịhụ na nnukwu Katidral Gothic nke a maara dị ka York Minster, n'okporo ámá ya a ma ama bụ Shambles, na mgbidi ogologo ya na etiti akụkọ ihe mere eme.
N'ịbụ nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ nke England, ndị Rom hiwere Bath na 43 AD dịka ihe mgbagwoju anya. Nke a bụ ama nke mmiri ya n’akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ mmadụ bịara n’obodo a iji gwọọ ọrịa ha. Taa ndị ọbịa nwere ike ịsa ahụ ọzọ na naanị isi iyi mmiri na-ekpo ọkụ na Britain, na nnukwu ụlọ ọrụ ọkụ nke Thermae Bath Spa.
Bath nwere ihe ncheta dị mkpa dịka Roman Baths, Royal Crescent ma ọ bụ Abbey nke XNUMXth, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ndị hụrụ ọrụ Jane Austen n'anya agaghị echefu ịbịa Bath, dịka onye ode akwụkwọ a ma ama biri ebe a afọ ole na ole. Ihe a na-akpọ Jane Austen Center na-anakọta ahụmịhe nke onye edemede na-eto eto bi na Bath na otu obodo siri metụta ọrụ ya.
Akpọrọ ya onye nchebe nke Wales, ọ bụ otu n'ime obodo kacha nta na UK. Ọtụtụ ndị njem na-abịa ebe a na-adọrọ mmasị site na nnukwu onyinye ya metụtara ecotourism ebe ọ bụ na ị nwere ike ịme ihe omume dịgasị iche iche dị ka sọọfụ, kayak, ikuku mmiri, ịrị ugwu ma ọ bụ ikiri dolphins na whale.
Site na echiche ọdịbendị, St. Davids nwere nnukwu katidral nke malitere na narị afọ nke XNUMX, nke bụ naanị otu nke nwere oke osisi nke osisi oak nke sitere na Irish. Na mgbakwunye, n'akụkụ katidral ahụ, mkpọmkpọ ebe mgbe ochie nke Bishops Palace.
N'ịbụ obere obodo, enwere ike ịhụ ịnyịnya ígwè n'ụzọ dị mfe, yabụ anyị na-akwado ọ funụ a na ụzọ dị iche iche nke nlegharị anya n'obodo ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Nkechi » United Kingdom » Obodo 5 kachasị amasị nke British na Great Britain
Free ihe na-eme na-ahụ na Paris
Gaa na Dampier, ụsọ oké osimiri Australia na-enweghị nsogbu